शाखा प्रबन्धकले कसरी बैंक व्यबस्थापन गर्ने ? के के कुरामा ध्यान दिने ? ~ Banking Khabar
प्रवन्धक प्रक्रियामुखी मात्र भएर पुग्दैन । बैंकिंग एउटा व्यवसाय भएकोले परिणामले मात्र अर्थ राख्दछ । परिणाम वित्तीय विवरणमा झल्किनुपर्दछ । प्रवन्धकमा कुनै पनि कुराको तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्न सक्ने, भविष्यलाई आँकलन गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । शाखामा हुने हरेक औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयहरुको विस्तृत जानकारी हुनुपर्दछ । लेखक बैंकिङ विज्ञ हुन् ।